कार्तिक ८, २०७७ शिवनाथ यादव
भनिन्छ विपत बाजा जाएर आउदैन । हो विपत बाजा बजाएर आउदैन तर आई सके पछि धेरै पाठहरु सिकाएर जान्छ । विपतबाट ढलेका शहरहरु विकसित रुपमा तयार भएका कति उदारणहरु छन ।
विपतपछि गरिने विकास निर्माणका काम होस वा व्यतिmगत निर्माणका काम होस त्यसमा धेरै ध्यान दिईन्छ र धेरै ठाउँमा दिईएको उदारणहरु पनि छन । अहिले पनि विश्व व्यापीरुपमा कोभिड १९ को महामारी चलिरहेको छ । यस हाम्रो जिवन शैलीलाई फेर बदल गरिदिएको छ । यसबाट पनि हामी पाठ सिक्न सक्छौ र सिकेका पनि छौ होला । यस्ता विपतको समयमा गरिने पुर्वतयारी तथा शर्तकताले बहुत महत्व राख्छ तर खोई हाम्रा अगुवाहरुले किन नबुझेका हुन । अहिले कोरोनाको महामारी सकिएको छैन लकडाउन तथा निषेधाज्ञा हटाइएको मात्र हो । जिवन सहज बनाउनका लागि खोलिएको मात्रै हो । अति आवश्यक काम गर्ने मात्र हो तर यहाँ त जनताको के कुरा गर्ने आफुलाई जनताको लागि काम गर्ने भन्ने राजनितिक दल नै बेमौषमी बाजा बनाउन व्यस्त देखिएका छन । अरुलाई सामाजिक दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, भिडभाड नगर्ने तथा अति आवश्यक कामका लागि मात्र बाहिर निस्कने जेतना फैलाउनु पर्ने हाम्रा नेता ज्युहरु राजनीति गतिविधिमा लाग्नु भएको छ । यतिका दिन महामारीको चपेटमा परेका जनतालाई भेला गराएर के गर्न खोजेका हुन । शतिm प्रदर्शन नै गर्ने हो भने महामारी पछि गर्दा हुन्छ । आखिर हामी विपतबाट पाठ किन सिक्दैनौ ।
एकातिर सरकारले परिक्षण तथा उपचारबाट हात झिक्दै गएको अवस्था छ । संक्रमितको संख्यावाला ग्राफ बढने अवस्थामा यता भेला, शुभकामना आदानप्रदान, प्रवेश, ग्रहण जस्ता कार्यक्रम आयोजनाका लहर शुरु भएको छ । यसले के देखाउछ भने हामी विपतबाट केही सिक्ने प्रयास गरेका छैनौ न त सिक्ने चाहना नै हामीमा छ ? यदि भएको भए विपतबाट कसरी लडने भन्ने कुराको योजना बनाउने र सवै तहका सरकारलाई यसका लागि दवाव दिने काममा व्यस्त हुनु पर्दथ्यो । न कि भेला र सभामा ।
विपत रहेको बेलामा आवश्यक भन्दा बढी डराउने, त्रास फैलाउने तर यसका क्षति न्युनिकरणका लागि प्रयास नगर्ने, विपतलाई चाढै विर्सिने यो प्रवृतिले हामीलाई अप्ठयारोमा पार्न सक्छ । यस तर्फ खोई त हाम्रो ध्यान गएको ? खोई विपत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारीमा हामी जुटेको ? खोई हाम्रा जनतालाई महामारीबाट बच्नका लागि जनचेतनामु्लक काम गरेको ? विपतबाट खोई पाठ सिकेको ?
अहिलेको महामारी हाम्रो ठाउमा मात्र नभएर विश्वलाई नै अप्ठयारो पारेको छ । यसबाट लडनका लागि सवैको साथ र सहयोग चाहिन्छ । हामी
जस्ता देशमा जहाँ स्वास्थ्य सेवा कमजोर छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भौतिक संरचना नै कमजोर छ यस्तो ठाउमा हामी अझ बढी सुरिक्षत र शर्तक रहन जरुरी छ । अव आउने दिनमा हाम्रा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर भौतिक संरचनाहरु पनि निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
यस्तो समस्या भोगि सके पनि अझ हाम्रो ध्यान प्रवेशद्धार, चौतारा, भवन मै छ । अव हाम्रा प्राथमिकता तय गर्नु पर्ने बेला भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक संरचनामा लगानी गर्ने सोच बनाउनु पर्ने,जनतालाई सचेत बनाउदै स्वास्थ्य सेवामा पहुच पु¥याउनु पर्ने समय भएको छ । यस तर्फ हाम्रा जनप्रतिनिधि, राजनितिक दल सवैको ध्यान जान जरुरी छ । होइन भने आउने दिनमा हाम्रा जनताले प्रश्न गर्ने छन । हाम्रा सन्तानले प्रश्न गर्ने छन । भुकम्पबाट के सिक्यौ, हावाहुरीबाट के सिक्यौ ? कोरोनाको महामारीबाट के सिक्यौ अनि हामी के जवाफ दिने त्यसैले विपतबाट पाठ सिक्न जरुरी छ ।
#कोरोना महामारी र चाडबाड #कोरोना महामारी र पुजापाठ #कोरोना कहर
शनिवार, कार्तिक ८, २०७७, ०१:१०:००
भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष नरवाणे नेपाल आइपुगे
कार्तिक १, २०७७ शिवनाथ यादव
आश्विन २६, २०७७ शिवनाथ यादव